အွန်လိုင်း Sim အရောင်း
တယ်လီနော ရသ အစီအစဉ်သည် MyTelenor Application အတွင်း တီဗီအစီအစဉ်များ ရုပ်ရှင်များ ဇာတ်လမ်းတွဲများကို ကြည့်ရှုနိုင်သည့် အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Mahar Live TV, Mahar Video On Demand (VOD) , Viu အစီအစဉ်များကိုလည်း တယ်လီနောဖုန်းအင်တာနက်ဖြင့် ကြည့်ရှုခပေးစရာမလိုပဲ ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Live TV Channel - Mahar
VOD - Mahar and Viu
Mahar Live TV
မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မည့် တီဗီအစီအစဉ် ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် အကောင်းဆုံးနဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများစွာရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်ဘဏ်တိုက်ကြီးဖြစ်တဲ့ မဟာမှ ဇာတ်ကားကောင်းများကို တယ်လီနောရဲ့ Flexi မှာခံစားကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ မဟာမှာ မြန်မာဇာတ်ကား၊ မြန်မာ၊ အိန္ဒိယ၊ ကိုရီးယား စီးရီးတွေနဲ့ ကားတွန်းကားတွေကိုလည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
သင့်ကို အချိန်နေရာမရွေး ဖျော်ဖြေမှုရသရနိုင်စေဖို့ သင့်စိတ်ကြိုက် ဒရမ်မာ၊ ဟာသ၊ အက်ရှင်၊ သည်းထိတ်ရင်ဖို စတဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့စီးရီးတွေကို VIU မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာရုံတင်ကားအသစ်တွေနဲ့အတူ ကိုရီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း ဇာတ်လမ်းများကို ၁၀၀% မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ VIU မှာကြည့်လိုက်ပါ။
1. MyTelenor App Main Page
2. Viu ကိုနှိပ်ပြီး Telenor mobile data နဲ့ကြည့်ရှုပြီး အခမဲ့ ကြည့်ရှုခွင့်ကိုရယူပါ
2. Live TV
2. Viu နှင့် Mahar မှ ရုပ်ရှင်များကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ
2. VOD ကိုနှိပ်ပါ။
Mahar Free Trial
2. Play ဆိုသည့် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
3. အခမဲ့တစ်လကြည့်ရှုခွင့်ရယူရန် OK ကိုနှိပ်ပါ။
3. လစဉ်ကြည့်ရှုခွင့်ကို ၂၉၉၉ကျပ်နှင့် ယူရန် Subscribed ကိုနှိပ်ပါ။
4. OTP ထည့်ပါ။
6. လစဉ်ကြည့်ရှုခွင့်ကို ရယူပြီးကြောင်းစာတိုရရှိပါမည်။
2. Check your subscription status ကိုနှိပ်ပါ။
3. unsubscribed ကိုနှိပ်ပါ။
4. OK ကိုနှိပ်ပါ။
5. Yes ကိုနှိပ်ပါ။
6. လစဉ်ကြည့်ရှုခွင့်ကို ပယ်ဖျက်ပြီးကြောင်းစာတိုရရှိပါမည်။
တယ်လီနော ရသ အကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။
MyTelenor Application အတွင်း တီဗီအစီအစဉ်များ၊ ရုပ်ရှင်များ၊ဇာတ်လမ်းတွဲများကို ကြည့်ရှုနိုင်မည့် အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ရုံတင်ရုပ်ရှင်ကားများကိုပါ ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Live TV နှင့် Video On Demand (VOD) အကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။
Live TV အစီအစဉ်မျာ ကြည့်ရှုခပေးစရာမလိုပဲ ၂၄နာရီ ရရက်ကြည့်ရှုနိုင်မည့်အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ Viu မှာ Video on Demand (VOD) ရုပ်ရှင်ကားများ ဇာတ်လမ်းတွဲများကို ကြည့်ရှုခ ပေးစရာမလိုပဲ အခမဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး Mahar ရှိဇာတ်ကားများကို စတင်ကြည့်ရှုသူများအနေဖြင့် တစ်လအခမဲ့ကြည့်ရှုခွင့် ရမည်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပါက ကြည့်ရှုခပေးချေပြီး ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Live TV အစီအစဉ်မည်မျှပါဝင်မည်နည်း။
ယခုအချိန်တွင် မဟာတီဗီအစီအစဉ် ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
Video on Demand (VOD) အစီအစဉ်ဘယ်နခုပါဝင်မည်နည်း။
'Mahar' နှင့် 'Viu' အစီအစဉ်နှစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Mahar နှင့် Mahar TV ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
Mahar သည် မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများစွာကိုကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး Mahar TV သည် တီဗီအစီအစဉ်အနေဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာ၊အိန္ဒိယ၊ကိုရီးယားနှင့် အခြား နိုင်ငံတကာဇာတ်လမ်းများကို ၁၀၀% စာတန်းထိုးဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်မည့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
Viu နှင့် Mahar အတွက် ကြည့်ရှုခပေးဆောင်ရမည်လား။
တယ်လီနော ဖုန်းအင်တာနက်ဖြင့် ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ကြည့်ရှုခ အခမဲ့ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Viu နှင့် Mahar ကို Wi-Fi ဖြင့်ကြည့်ပါက ကြည့်ရှုခပေးချေရမည်လား။
Wi-Fi ဖြင့် ကြည့်ရှုမည်ဆိုလျှင် ကြည့်ရှုခပေးချေရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Live TV နှင့် Video On Demand (VOD) ကိုကြည့်ရှုပါက ဒေတာဖိုးကုန်မည်လား။
ကျသင့်သည့် ဒေတာဖိုးများကို ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Mahar အက်ပလီကေးရှင်းတွင် ကြည့်ရှုခပေးချေထားပါက MyTelenor အက်ပလီကေးရှင်း Yatha အစီအစဉ်မှာရော ကြည့်ရှုလို့ရပါသလား။
Mahar အက်ပလီကေးရှင်းတွင်ဖြစ်စေ MyTelenor အက်ပလီကေးရှင်းရှိ Yatha အစီအစဉ်တွင်ဖြစ်စေ ကြည့်ရှုခပေးချေထားပါက မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။